ICT for Myanmar: 2018
Software Defined Networking (SDN) – 101, Part 2
ပြီးခဲ့တဲ့ Part 1 မှာတုန်းက Traditional Networking ရဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေ အကြောင်းနဲ့ SDN အကြောင်းကို အနည်းငယ် အစပျိုးခဲ့ပါတယ်။
အခုစပြောမှာကတော့ SDN ရဲ့ အဓိက အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ SDN Controller အကြောင်းပါ။
သူကတော့ Traditional Network တွေမှာတုန်းက လိုအပ်တဲ့ Configuration တွေကို Configure လုပ်ဖို့ Network Device တခုချင်းစီရဲ့ Control Plane ကို ဝင်ပြီး configure လုပ်ရတာမျိုးမဟုတ်တော့ပဲ။ သူ့ရဲ့ Control Plane တခုတည်းကို Configure လုပ်ပြီး Network Device တွေကို ခိုင်းတာပါ။
ဒီမှာလဲ SDN Controller ရဲ့ Vendor ပေါ်မူတည်ပြီး Controller မှာပဲ Control Plane ရှိတာမျိုးနဲ့ Network Device တွေရဲ့ Control Plane တွေကို Control လုပ်တဲ့ Controller ဆိုပြီး ကွဲပါသေးတယ်။
အောက်ကပုံကို ကြည့်လိုက်ရင် SDN Controller ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာကို အနည်းငယ် ထင်သာမြင်သာရှိပါလိမ့်မယ်။
SDN Controller မှာ
Northbound Interface နဲ့ Southbound Interface ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။
Northbound Interface ဆိုတာကတော့ SDN Controller ကို Access လုပ်ဖို့နဲ့ လိုအပ်တဲ့ Instruction တွေပို့ပေးဖို့ / ရယူဖို့ အတွက် သုံးရတဲ့ Interface ပါ။
ဒီ Interface ကို Access လုပ်ဖို့အတွက် API (Application Programming Interface) ကို
- သူ့ ရဲ့ Vendor က ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ GUI
- Python ကဲ့သို့တော့ Programming Language တမျိုးမျိုး
- တခြား Third Party Application မျိုးနဲ့
SDN Controller က REST API (Representational State Transfer) ဆိုတာကို သုံးပြီး Instruction တွေကို အပေးအယူလုပ်ပါတယ်။
ဒီလို လုပ်တဲ့အခါ သုံးတဲ့ Message ကတော့ ကျတော်တို့ နေ့စဉ်သုံးနေကျဖြစ်တဲ့ HTTP message ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျတော် အပေါ်မှာ ပြောခဲံတဲ့ API ကို Access လုပ်နိုင်တဲ့ ပုံစံတမျိုးမျိုးနဲ့ SDN Controller ကို HTTP Get message ပို့ပြီး Network မှာ လက်ရှိရှိနေတဲ့ VLAN Information တွေကို Request လုပ်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့။
SDN Controller က HTTP Respone message ပြန်ပို့ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ information ကို ပြန်ပို့ပေးပါတယ်။
ဒီလိုပြန်ပို့ပေးတဲ့ အခါ Format ၂ မျိုးနဲ့ ပို့ပေးပါတယ်။ သူတို့ကတော့
- XML (eXtensible Markup Language) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ Northbound Interface အကြောင်းပါ။ အောက်ကပုံလေးကို ကြည့်လိုက်ရင် အပေါ်က ပြောထားတာတွေထက် ပိုရှင်းပါလိမ့်မယ်။
Southbound Interface ကတော့ SDN Controller ကနေ Network Device တွေကို ချိတ်ဆက်ဖို့ပြီး Instuction တွေပေးဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ Interface ပါ။
သူကလဲ Physical Interface မဟုတ်ပဲ Software Interface တခုပါပဲ။
- Cisco OpFlex နဲ့
- အခုလက်ရှိ Network Device တွေအတွက် Cisco က ထုတ်ပေးထားတဲ့ APIC-EM ဆိုတာတွေကတော့ အပေါ်က ပြောတဲ့ Soutbound Interface တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ကပုံလေးကတော့ Southbound Interface ကို ထင်သာမြင်သာရှိစေပါတယ်။
ကဲ ဒါကတော့ SDN Controller နဲ့ သူ့ရဲ့ Interface နှစ်ခုအကြောင်းပါပဲ။
Southbound Interface ဆိုတာကတော့ Network Device တွေကို Configure လုပ်ဖို့အတွက် Instruction တွေပေးဖို့ (တနည်းအားဖြင့် Program ပေးဖို့) ဖြစ်ပြီး။
Nothbound Interface ဆိုတာကတော့ SDN Controller ကြီးကို Control လုပ်ဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
SDN မှာ အားသာချက်က Network Device တခုချင်းစီအတွက် ပေးရမယ့် အချိန်သက်သာပြီး Infrastructure ရဲ့ Topology တခုလုံးကို Centralize လုပ်နိုင် မြင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
အားနည်းချက်ကတော့ Centralize ဖြစ်နေတဲ့အတွက် လုံခြုံရေးပိုင်းနဲ့ မှာ အထူးဂရုစိုက်ဖို့ လိုသလို Controller မှာ အမှားတခုခုလုပ်လိုက်တာနဲ့ Network တခုလုံး ပြဿနာတက်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို SDN အကြောင်း တီးမိခေါက်မိပြီလို့ ယူဆပါတယ်။
ဖတ်ရတာ မရှင်းမရှင်းနဲ့ သိပ်နားမလည်သေးဘူးဆိုရင် အောက်ကမူရင်း လင့်မှာ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။ မူရင်းပို့စ်ကတော့ ဖတ်ရပိုရှင်းပါတယ်။
Original Source : https://networklessons.com/cisco/ccna-routing-switching-icnd2-200-105/introduction-to-sdn-software-defined-networking/
Software Defined Networking (SDN) - 101, Part 1
ဒီဖက်နှစ်ပိုင်းတွေမှာ အကြားအများဆုံး စကားလုံးကတော့ SDN ဆိုတာပါပဲ။
ဒီခေါင်းစဉ်အတွက် Web page ပေါင်းများစွာကို ဖတ်ကြည့်ရင်း မျက်မမြင်ပုဏ္ဏား ခြောက်ယောက် ဆင်ကို စမ်းကြည့်သလိုမျိုး ဖြစ်နေသူတွေအတွက် နည်းနည်းရေးပါရစေ။
SDN ကို မပြောခင် ဘာကြောင့် SDN ကို လေ့လာဖို့ လိုသလဲ ဆိုတာလေး ပြောပါရစေ။
ဒီဘက်ခေတ်မှာ Heart Rate Monitor, Steps Counter , Watch, Wireless IP Camera အစရှိတဲ့ Device တွေဟာ Internet Access လိုလာကြပါတယ်။
ဘာလို့လိုအပ်လဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် အများကြီးရှိတဲ့ အထဲက ဥပမာ အနေနဲ့ အနည်းငယ်ထုတ်ပြရမယ်ဆိုရင်
- Statistic Data Analysis
အပေါ်က ပြောခဲ့တဲ့ Device တွေကို Internet of Things (Stupid Device) တွေလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
အဲဒီ ပစ္စည်းတွေ ပေါ်မှာ run နေတဲ့ Application တွေအတွက် လုံလောက်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့ နောက်ကွယ်မှာ အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ Server တွေရှိပါတယ်။
အဲဒီ Server တွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ လိုအပ်သလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေဖို့ အတွက် Intent-Based Network ဆိုတာလိုလာပြန်ပါတယ်။
အဲဒီ Network အတွက်ပဲ ကျတော်တို့တွေ SDN ဆိုတာကို လိုလာပါတယ်။
ဒီတော့ မေးစရာရှိလာပါတယ်။ SDN မှပဲ လုပ်နိုင်မှာလား။ Traditional Network မှာရော မလုပ်နိုင်ဘူးလားပေါ့။
ဒီမေးခွန်းအတွက် Traditional Network ရဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေ အကြောင်းကို နားလည်ထားမှ ရပါမယ်။
ဆိုကြပါတော့ Router တလုံးက သူ့ဆီကို ဝင်လာတဲ့ Packet တခုကို Route ပေးဖို့
- Destination က ဘယ်လဲ။ Routing Table ထဲမှာရော ရှိရဲ့လား။
- ဘယ် Routing Protocol နဲ့ Learn လုပ်ထားတာလဲ။
- MAC Address က ဘာလဲ။
- Destination ကို သွားဖို့ Hop ဘယ်နှစ်ခု ဖြတ်ခဲ့ပြီး ဘယ်နှစ်ခု ထပ်ဖြတ်သွားရအုံးမှာလဲ။
- ဝင်လာတဲ့ Packet ကရော မပျက်မစီးပဲ ရှိနေသေးလား။
စတဲ့ လုပ်ရမယ့် အဆင့်တွေရှိပါတယ်။
အဆိုပါ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ လုပ်ဖို့ အတွက်
ဆိုတာတွေ Network Device တွေမှာရှိပါတယ်။
Control Plane ကတော့ routing information တွေ exchange လုပ်ဖို့ အဓိက တာဝန်ယူပါတယ်။
Data Plane ကတော့ Traffic တွေကို forward လုပ်ဖို့ တာဝန်ယူပါတယ်။
Management Plane ကတော့ Network Device တွေကို access လုပ်ဖို့ အတွက်လိုအပ်မှုတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ တာဝန်ယူပါတယ်။
Plane တွေရဲ့ တာဝန်ယူ အလုပ်လုပ်ပုံကို အောက်က ပုံလေးမှာ နမူနာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒီ Plane တွေအကြောင်း အကြမ်းဖျဉ်း သိပြီဆိုရင် Traditional Netowork တွေရဲ့ ကန့်သတ်ချက်ကို ပြောပါမယ်။
အောက်က ပုံလေးကို ကြည့်ကြည့်ပါ။
Virtualized Server တွေ အများကြီး Run ထားတဲ့ ESXi Server တလုံး Network မှာ ရှိတယ်ပေါ့။
လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ Virtual Server တလုံး run ဖို့လိုပြီး အဲဒီ Server အတွက် VLAN တခုလိုအပ်တယ်ပေါ့။
ဒီအခါမှာ System Team အတွက်က လိုအပ်တဲ့ Hardware Resource သာ ESXi မှာ ရှိသေးရင် ချက်ချင်းဆိုသလို Server ကို Provisioning လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Network Team အတွက်ကတော့ လိုအပ်တဲ့ VLAN ကို Switch တိုင်းမှာ Create လုပ်ဖို့ ၊ SVI အသစ်အတွက် Routing ၊ VLAN အသစ်ကနေ ကျန်တဲ့ Subnet တွေကို သွားနိုင်အောင် ခွင့်ပြုဖို့ Firewall တွေ Configure လုပ်ဖို့ ၅ ရက်လောက် ကြာတတ်ပါတယ်။ ဒါက အစောဆုံးပါ။ :D
ကဲ ဒီမှာပဲ Software Defined Networking ဆိုတာကြီးက Business လိုအပ်ချက်အနေနဲ့ ပေါ်လာတော့တာပါပဲ။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကမ္ဘာ့ အနောက်ခြမ်းမှာ မနေ့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကို ကမ္ဘာ့အရှေ့ခြမ်းက ဒီနေ့မှ သိရတဲ့ ခေတ်မဟုတ်တော့လိုပါပဲ။
အမေရိကန်မှာ ဇူကာဘတ် တရားရင်ဆိုင်နေတာကို စင်ကာပူက ကျတော်က အိမ်သာတက်နေရင်း လက်မှာ ပတ်ထားတဲ့ Apple Watch ကနေ Live ကြည့်လို့ရနေတဲ့ ခေတ်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
အဲလို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ သိနေရဖို့ နောက်ကွယ်က Run နေတဲ့ Infrastructure ဆိုတာ တခုခု ပြောင်းလဲဖို့ လိုတိုင်း စောင့်နေရတာမျိုး ဖြစ်လို့မရတော့လို့ပါပဲ။
SDN မှာတော့ Lightweight Wireless Access Point တွေကို Centralized Wireless Controller လိုမျိုး LightWeight Router, Switch, Firewall တွေကို Centralized Controller ကနေ တခါတည်းနဲ့ Configure အားလုံးကို လုပ်နိုင်တော့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် Post မှာ API, Python, SDN Controller စတာတွေကို ရေးပါမယ်။
My Acknowledgements to supporter on my CCIE journey
၂၀၁၃ မှာ Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT) လက်မှတ်စရပြီးတာကနေ Cisco လမ်းကို လျှောက်လာလိုက်တာ ခု 2018 ကုန်ခါနီး မှာတော့ Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) အဖြစ်တော့ ရောက်ခဲ့ပါပြီ။
CCIE တယောက်ဖြစ်ဖို့ အတွက် အထောက်အပံ့ကောင်းတွေ ပေးခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးတင်ရမယ့်သူတွေ ကျတော့်မှာ ရှိပါတယ်။
တနေ့တနေ့ ကီးဘုတ်နဲ့ မော်နီတာကို ပဲ အဖော်ပြုနေတဲ့ ခင်ပွန်းကို တချက်ကလေးမှ အပြစ်မမြင်ပဲနေပေး၊ စာမေးပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ချိန်ကနေ စာမေးပွဲ အောင်တဲ့အထိ ဆိုရင် ကားတစီးလောက် ဝယ်နိုင်တဲ့ ငွေပမဏကို သုံးတဲ့ ကျတော့်ကို တစက်ကလေးမှ အပြစ်မတင်တဲ့ ကျတော့်ရဲ့ ဇနီး Hnin Ei Phyu၊
စာမေးပွဲ ဖြေဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ အချိန်တလျှောက်လုံး ငြင်းကြခုန်က ဆွေးနွေးကြနဲ့ တကယ့်ကို Study Partner ကောင်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်လဲ ဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်တဲ့ KO KYAW KYAW NAING ၊
ပြင်ဆင်နေတုန်းမှာ လဲ အတူတူ ကူညီခဲ့ကြ၊ သူတို့ အောင်ပြီးသွားတဲ့ အချိန်မှာလဲ ခုထိ ကူညီနေကြတဲ့ ကျတော့် ညီအကိုတွေဖြစ်တဲ့
KO SOE MIN HTIKE (CCIE# 58654) - (Routing and Switching)
KO SAI KYAW ZIN PHYO (CCIE# 58710) - (Routing and Switching)
KO THAN HTIKE WAI (CCIE# 58711) - (Routing and Switching)
တို့ကိုတော့ အထူးတလည် ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူတွေ အဖြစ် ဒီနေရာကနေ မှတ်တမ်းတင်ပါရစေ။
၂၀၁၆ ဇူလိုင်လ ကနေ ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာလ အထိ တက်ခဲ့တဲ့ BIM ကတော့ ကျတော့် CCIE လမ်းကြောင်းရဲ့ အစပါပဲ။
ဒီအတွက် စင်ကာပူမှာ သင်တန်းဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့
KO ZAY YAR PHYOE (CCIE #24573) - (Service Provider, Routing and Switching)
(ကျတော်တို့ Batch ပြီးတော့ ဆက်မဖွင့်တော့ပါ။ မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး သူဌေးကြီးတွေပြန်လုပ်ကြတော့ မယ်ဆိုလို့ပါ။)
သီအိုရီတွေ သင်ပေးခဲ့ပြီး စာမေးပွဲ ဖြေဖို့ (စာမေးပွဲ ဖြေဖို့ Sponsor တော့မပေးပဲ) တဖွဖွ ပြောတဲ့
KO HTUN WIN NAING (CCIE #52207) - (Routing and Switching)
Troubleshooting ကို ဘယ်လိုမျိုး လုပ်ရလဲ ဆိုတာကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် သင်ပေးခဲ့တဲ့
KO AUNG KHING SAW OO (CCIE #51658) - (Routing and Switching)
တို့ကို ဒီနေရာကနေပဲ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ပါရစေ။
Exam နဲ့ Exam Center တွေအကြောင်း မေးတိုင်း ဖြေပေးခဲ့တဲ့
KO MIN WAI (CCIE #53821) - (Routing and Switching)
KO YAN NAING AUNG (CCIE #56101) - (Routing and Switching)
စာမေးပွဲ Result မကောင်းတာနဲ့ ချက်ချင်းဖုန်းတွေဆက်ပြီး အားပေးတတ်တဲ့
KO NANDA KYAW (CCIE #55535) - (Routing and Switching)
CCIE နဲ့ပတ်သက်ပြီး မှတ်သားစရာတွေကို သူ့ blog မှာ အမြဲရေးတတ်တဲ့
KO AUNG PHYO LWIN (CCIE #38100) - (Routing and Switching)
(သူ့စာလေးတွေထဲက မှတ်သားစရာတွေက Exam အတွက်ရော လက်တွေ့လောက အတွက်ပါ အထောက်အကူ အတော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။)
လိုအပ်တဲ့ အထောက်အပံ့တွေကို လိုအပ်တိုင်းမှာ ချက်ချင်းဆိုသလို ပေးတဲ့
KO NYAN HTOO AUNG (CCIE #59654) - (Routing and Switching)
Useful Cisco Feature Tools
ဒီနေ့ ပျင်းပျင်းနဲ့ Cisco Site ကို မွှေရင်းနဲ့ အရင်ကထက် ပိုများနေတဲ့ Feature Tools တွေ တွေ့မိလို့ သဘောကျတဲ့ Tool လေးတွေ ပြန်မျှလိုက်ပါတယ်။
IPSec Overhead Calculator Tool ကတော့ ASA နဲ့ IOS device တွေမှာ IPsec tunnel သုံးတဲ့ အခါ MTU Size ကို တွက်လို့ရအောင် သုံးနိုင်ပါတယ်။
IPsec Lan to Lan Configuration Checker ကတော့ IPsec Configuration လုပ်ထားတာ မှန် မမှန် စစ်ဆေးပေးတာပါ။
Packet Capture Config Generator and Analyzer ကတော့ Wireshark တွေဘာတွေ မသုံးတော့ပဲ Device ထဲမှာ တခါတည်း Packet Capture လုပ်ပြီး Real Time ကြည့်လို့ရအောင် Configure လုပ်ပေးဖို့ ကူညီတာပါ။
Subnet Calculator ဒါကတော့ Third-Party Website/Tool တွေ မသုံးချင်ရင် အဆင်ပြေတာပေါ့။
Cisco Firewall Configuration Conversion Tool ကိုတော့ တခြား Firewall Vendor (ဥပမာ Juniper/Checkpoint) ကနေ Cisco ASA ကို Migrate လုပ်ချင်တဲ့ အခါ ကူညီပေးဖို့ပါ။
Access List Checker ကတော့ အလွန်အင်မတန်များပြားလှတဲ့ Access List တွေ နဲ့ Device တွေမှာ Access List ကို စစ်ဆေးချင်တဲ့ အခါ သိချင်တဲ့ Access List တခုကို ရှာတဲ့ အခါ လွယ်ကူအောင် လုပ်ပေးတာပါ။
အပေါ်က ပြောထားတဲ့ Tool တွေ အပြင် IOS Device Command ကနေ NXOS Device Command ကိုပြောင်းသုံးဖို့ Convert လုပ်ပေးတဲ့ Tool အစရှိတဲ့ များပြားစွားသော Tool တွေကို လက်တည့်စမ်းကြည့်ချင်ရင်တော့ အောက်က လင့်မှာ ရနိုင်ပါတယ်။
အားလုံး အတွက် Cisco ID လေးပဲ လိုပါတယ်။ တော်တော်များများကတော့ Beta Version ပဲရှိသေးတာ ဖြစ်လို့ ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ အဆင့်ရောက်ဖို့တော့ အနည်းငယ်လိုပါသေးတယ်။
Why we need to do ospf prefix suppression? How to configure on Cisco Routers?
OSPF Prefix Suppression ကို Fully Mesh WAN/LAN topology တွေမှာ Convergence Time ပိုမြန်အောင်လုပ်ချင်တဲ့ အခါ သုံးကြပါတယ်။
နည်းလမ်းတွေ အများကြီးထဲက လွယ်ကူလျင်မြန်စွာနဲ့ အသုံးချလို့ရတဲ့ နည်းတခုပေါ့။
MPLS လို Network မျိုးမှာဆိုရင် ပိုသုံးလို့ကောင်းတာပေါ့။
အဓိကက Transit Network တွေရဲ့ prefix ကို suppress လုပ်တာပါ။
Router တွေအနေနဲ့ သွားချင်တဲ့ နေရာကို ရောက်ဖို့ next hop ကိုပဲ လိုတဲ့ အတွက် Fully Mesh လုပ်ထားတဲ့ Network တွေမှာဆိုရင် Transit Network တွေရဲ့ Prefix တွေကို ပါ Routing Table ထဲမှာ သိမ်းထားဖို့ တကယ်တော့ မလိုအပ်ပါဘူး။
Router ၃ လုံးကို Interface address တွေနဲ့ OSPF ကို Configure လုပ်ထားပါတယ်။
ဒီ အခြေအနေမှာ R3 ကနေ Routing Table ကို ခေါ်ကြည့်တဲ့ အခါ R1 ရဲ့ Loopback နဲ့ R1-R2, R2-R3 ကြားထဲက Transit Network တွေကို Learn လုပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ပြီးတော့ LSA Database ကိုကြည့်ပြီး hight light လုပ်ထားတာကို မှတ်ထားပါ။ နောက်ဆုံးမှာ R3 ကနေ R1 Loopback ကို reachability ရှိမရှိ သိအောင် Ping ထားပါတယ်။
R3 အနေနဲ့ R1 ရဲ့ Loopback ကိုပဲ သိဖို့လိုတာ R1-R2 ကြားက Transit Network ကို မသိချင်ဘူးဆိုတဲ့ အခါမျိုးမှာ OSPF Prefix Suppression ကို သုံးတာပါ။
- prefix-suppression ဆိုပြီး OSPF Process အောက်မှာ Globally configure လုပ်တာရယ်
- Interface တခုချင်းစီမှာ ip ospf prefix-suppression ဆိုပြီး configure လုပ်တာရယ် ဆိုပြီး ပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့ သုံးလို့ရပါတယ်။
ကျတော်အောက်မှာ R2 ကို Globally configure လုပ်ပြီး R1 ကို interface မှာ configure လုပ်ပြီး ospf prefix ကို suppress လုပ်ပြထားပါတယ်။
R1 loopback ကို R3 ကနေ ping ကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ R3 ရဲ့ Routing Table ကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
တခါတည်း LSA Database ကို ကြည့်ပါ။ အပေါ်က prefix suppression မလုပ်ခင်တုန်းက LSA Database ပုံနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ပါ။
ဘာကွာသွားလဲ ဆိုတာကို သိပြီဆိုရင် သင်လဲ ospf prefix suppression ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲ ဘယ်လို configure လုပ်ရတာလဲ ဆိုတာ သိပြီလို့ ယူဆပါတယ်။
ကျတော်တို့ Network သမားတွေက Infrastructure တခုရဲ့ ပထမဆုံး တံခါးမှူးတွေပေါ့။
ကျတော် အပါအဝင် အဲဒီတံခါးမှူးတွေ တော်တော်များများဟာ ကိုယ့်ရဲ့ Network Device တွေကို Hardening သေချာမလုပ်မိတာ တို့ ၊ Best Practice Configuration တွေကို မလိုက်နာတာတို့ အစရှိတဲ့
အဲဒီ အမှားတွေကို ကိုယ်တိုင်က သတိမထားမိတတ်၊ မေ့လျော့တတ်ပေမယ့် အဆိုပါ အမှားတွေ ကို အမြဲ စောင့်ကြည့်နေပြီး အသုံးချမယ့် သူတွေကတော့ အင်တာနက် မှာ အမြဲမပြတ်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီသူတွေက ဘယ်လို ကိုယ့်အမှားကို သိနိုင်လဲ ဆိုရင် မြောက်မြားလှစွာသော Tools တွေ ရှိပါတယ်။ အလကားလဲ သုံးနိုင်သလို ၊ ပိုက်ဆံပေးပြီးလဲ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Tools တွေကို ရနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ ပြရမယ်ဆိုရင် https://www.shodan.io ဆိုတဲ့ Website ကနေ အင်တာနက်ကို ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Device တွေအကြောင်းကို သိနိုင်သလိုမျိုးပေါ့။
တခါတလေ အပျင်းပြေ စိတ်ကူးပေါက်တိုင်း စိတ်ထဲရှိတဲ့ Device နာမည်နဲ့ ရှာကြည့်တာတောင် အားနည်းချက်တွေ ရှိနေတဲ့ Network Device တွေ Server တွေကို မြင်နေရတယ်ဗျ။
ခင်ဗျား လဲ Cisco 2960 တို့ Cisco 3945 တို့လို နာမည်တွေနဲ့ စမ်းရှာကြည့်ပါလား။ Telnet တွေ ပွင့်နေတာတို့၊ Access Limit လုပ်မထားတာတို့၊ တခါတလေ လက်တလော ရေပန်းစားနေတဲ့ Smart Install Client တွေဘာတွေတောင် တွေ့ချင်တွေ့နေရမှာ။
ဒါပေမယ့် တခုတော့ ကြိုသတိပေးထားပါရစေ။ ကိုယ်လုပ်နေတာတော့ ကိုယ်သိပါစေ။ မဟုတ်ရင်တော့ At your own risk နော်။ :D
When to use bgp redistribute-internal and why?
အပေါ်ကပုံမှာ R1 နဲ့ R2 က eBGP ၊ R2, R5 နဲ့ R3 က OSPF ကို underlying protocol အနေနဲ့ run ထားပြီး iBGP ကို အပေါ်က run ထားတယ်။
R3 နဲ့ R4 က တော့ Process ID မတူပဲ Area တူတဲ့ OSPF run ထားတယ်။
လိုချင်တာက R1 ရဲ့ Lo1 နဲ့ Lo2 network တွေကို R4 ကနေမြင်ချင်ပြီး။ R4 ရဲ့ Interface တွေကနေ(ဒီမှာတော့ e0/2 နဲ့ Lo0 ပေါ့) R1 ရဲ့ Loopback တွေဆီကို သွားလို့ရချင်တာ။
ပုံထဲက အတိုင်း Router တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် Configure လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် R3 ကနေ R1 ရဲ့ Lo1 နဲ့ Lo2 network တွေကို iBGP route တွေအနေနဲ့ မြင်ရလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ R4 ဖက်ကမြင်ရဖို့အတွက် R3 ကနေ R4 ရဲ့ OSPF ထဲကို Route Redistribute လုပ်ရမယ်။ ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ ?????
R4 ရဲ့ OSPF Route တွေကို R3 ကနေ R2 နဲ့ R5 ဖက်ကို Redistribute လုပ်ရမယ်။ ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ ????
ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ တော်တော်များများက R3 မှာ ဒီလိုလေး Redistribute လုပ်မယ်ထင်တယ်။
redistribute bgp 65123 subnets
အပေါ်က အတိုင်းဆိုရင် R3 ဖက်မှာ R4 ရဲ့ Route တွေကို မြင်ရမှာဖြစ်ပေမယ့် R4 မှာတော့ လိုချင်တဲ့ R1 ရဲ့ Lo1 နဲ့ Lo2 route တွေကို မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ R1 eBGP ကနေ advertise လုပ်လိုက်တဲ့ route တွေကို R2 က R5 နဲ့ R3 ကို iBGP အနေနဲ့ ပြန် advertise လုပ်ပါတယ်။ IGP ဖြစ်တဲ့ OSPF ကနေ advertise လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျတော်တို့ R3 ကနေ R4 ကို BGP ကို Redistribute လုပ် တဲ့ အခါ iBGP route တွေ မပါပါဘူး။ ဒါကြောင့်ပဲ R4 မှာ လိုချင်တဲ့ Route တွေမမြင်ရတာပါ။
ဒီအတွက် လိုချင်တာ ရဖို့ ကျတော်တို့ R3 ရဲ့ BGP အောက်မှာ bgp redistribute-internal ဆိုတဲ့ command ကို ထည့်ပြီး iBGP route တွေကို ပါ​ Redistribute လုပ်ပါလို့ ပြောရပါတယ်။
ဒီတော့မှ R4 မှာ R1 ရဲ့ Lo1 နဲ့ Lo2 network တွေကို OSPF route တွေအနေနဲ့ မြင်ရမှာပါ။
ကျန်တဲ့ ဘယ် Route ကိုတော့ ပေးမြင်စေမယ် မမြင်စေချင်ဘူး OSPF E2 အနေနဲ့ လား E1 အနေနဲ့လား စတာတွေကိုတော့ မိမိစိတ်ကြိုက် လိုသလို ပြုပြင်နိုင်ပါသေးတယ်။
ကဲ ဒီလောက်ဆို ရင် iBGP route တွေကို ဘယ်လို redistribute လုပ်လို့ ရလဲ ဆိုတဲ့ နည်းလမ်း တခု သိသွားပြီလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Cisco Cyber Ops Certification and learning materials
လွန်ခဲ့တဲ့ လေးလကျော်လောက်က Cyber Security နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Cisco က ပေးတဲ့ Scholarship Program အကြောင်း စာတပုဒ်ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ သိချင်ပြီး မဖတ်မိသေးရင် ဒီအောက်က လင့် မှာ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ပိုင်းသူတွေ Cyber Security ကို လေ့လာချင်ရင် လေ့လာနိုင်ဖို့ အတွက် ဒီ Program က ဘာတွေ သင်ပေးတယ် ဘာတွေလေ့လာရတယ် ဆိုတာကို ပြန်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
Program က Module (၂) ခု ပါပါတယ်။ Cisco Cybersecurity Fundamentals နဲ့ Cisco Cyberecurity Operations ဆိုပြီးတော့ပါ။
ပထမအနေနဲ့ Cisco Cybersecurity Fundamentals မှာဘာတွေ လေ့လာရလဲဆိုတော့
သူ့မှာ Section 1 ကနေ 14 ထိ ပါပါတယ်။
Section 1 မှာ OSI Model၊ TCP/IP အကြောင်း၊ IP Address တွေ၊ Port တွေ၊ ARP, DHCP, DNS, ICMP တွေ နဲ့ packet capturing အကြောင်း အတွက် tcpdump နဲ့ wireshark အကြောင်းတွေ ကို သင်ရပါတယ်။
Section2မှာကတော့ DHCP ကို Analyze လုပ်တာကနေ Subnet ခွဲတာ တွေပါပြီး Switch, AP တွေနဲ့ Routing Protocol တွေ အကြောင်းသင်ရပါတယ်။
Section3မှာ TCP/IP တွေရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို စသင်ပါတယ်။
Overview ပေါ့။ Lab အနေနဲ့ Recon, Footprinting, DHCP Attack စတာတွေ လုပ်ရပါတယ်။
Section4မှာ Cryptography အကြောင်းစုံနေအောင် သင်ရပါတယ်။
Hash Algorithm တွေ၊ Encryption တွေ၊ Digital Signature တွေ၊
Key Management တွေ၊ Server - Client ကြားက Encryption တွေ နဲ့ အားလုံး အတွက် Cipher Suite တွေ အကြောင်း အကုန်ပါပါတယ်။
Lab အနေနဲ့ Server - Client တွေကြားက Dignatal Signature တွေနဲ့ Certificate တွေကို လေ့လာရပါတယ်။
Section5မှာ Security Concept တွေစသင်ပါတယ်။
Confidentiality , Integrity, Availability ဆိုတာဘာလဲ။
Personal Identifiable Information ဆိုတာ ဘာလဲ။
Risk နဲ့ Vulnerability Assessment တွေက ဘာတွေလဲ။
Common Vulnerability Scoring System က ဘာကို ရည်ညွှန်းလဲ။
Access and Security ကို ဘယ်လို Control and Management လုပ်မလဲ ဆိုတာတွေပေါ့။
Section6မှာ Network Application တွေအကြောင်း သင်ပါတယ်။
DNS, Recursive DNS, HTTP , HTTPS, Web Scripting, SQL, SMTP တွေ အလုပ်လုပ်ပုံတွေကို လေ့လာရပါတယ်။
Section7မှာတော့ အပေါ်က Network Application တွေကို Attack လုပ်နည်းတွေ သင်ပါတယ်။
Password ရယူနည်းတွေကစပြီး hashing လုပ်ထားတဲ့ password တွေကို သုံးနည်းတွေ အပါအဝင် Attack နည်းလမ်းပေါင်းစုံ သင်ရပါတယ်။
Lab အနေနဲ့လဲ Attack ပေါင်းစုံ လုပ်ကြည့်ရပါတယ်။
Section 8 မှာ Windows OS အကြောင်း လေ့လာရပြီး။ Section9မှာ Linux OS အကြောင်းလေ့လာရပါတယ်။
Section 10 ရောက်တော့မှ အပေါ်က OS တွေကို ပစ်မှတ်ထားတဲ့ Endpoint Attack တွေအကြောင်းလေ့လာရပါတယ်။
Buffer Overflow ဆိုတာဘာလဲ ကနေ စပြီး Malware Deliver လုပ်ပုံ Privilege Escalation လုပ်ပုံ Pivoting လုပ်ပုံတွေ နဲ့ Exploite လုပ်ပုံတွေကို လေ့လာရတာပါ။
Lab အနေနဲ့ လဲ Endpoint ကို Attack လုပ်နည်းမျိုးစုံ လုပ်ကြည့်ရပါတယ်။
Section 11 မှာကျတော့ Attack ကို ကာကွယ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ သင်ရပါတယ်။
ဒီမှာတော့ IPS, IDS, SPAN တွေကစပြီး Security Onion အသုံးပြုပုံတွေ သင်ရပါတယ်။
Lab အနေနဲ့ လဲ Security Operation Center တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ SIEM တွေ လုပ်ကြည့်ရပါတယ်။
Section 12 မှာတော့ Host base protection နဲ့ Sandboxing ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာ လေ့လာရပါတယ်။
Lab အနေနဲ့ Malicious File တွေကို Sandbox ထဲ ထည့်ပြီး Analysis လုပ်ကြည့်ရပါတယ်။
Section 13 မှာတော့ Security Device များစွာက Alert တွေနဲ့ Log ပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင် အကြောင်းကို လေ့လာရပါတယ်။
Lab အနေနဲ့လဲ Log တွေ Alert တွေကို Classify လုပ်ရ Analysis လုပ်ကြည့်ရပါတယ်။
Section 14 ကျတော့ နောက် Module အတွက် Intro အနေနဲ့ SOC တွေရဲ့ Cyber Security Standard တွေ အကြောင်းကို စသင်ပါတယ်။
Cyber Kill Chain တို့ Diamond Model တို့ SOC Runbook တို့ ပေါ့ဗျာ။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက Stuxnet နဲ့ China Chopper RAT အကြောင်းတွေ ပါ လေ့လာရတာပါပဲ။ Nation State Sponsor တွေကနေ ထွက်လာတဲ့ နာမည်ကြီး Advanced Persistent Threats တွေအကြောင်းပေါ့။
ဒုတိယ Module ဖြစ်တဲ့ Cisco Cyberecurity Operations မှာတော့
Security Operation Center တွေ အလုပ်လုပ်ပုံကို အဓိက သင်ရတာပါ။ Section ပေါင်း ၁၅ ခုပါပါတယ်။ စာရှည်မှာ စိုးလို့ အတိုချုံးပြီးရေးလိုက်ပါတယ်။
- Data Anaytics လုပ်ပုံတွေ၊ Automated Report တွေ၊ Anomaly Alert တွေ
- များပြားလှတဲ့ Log တွေ Alert တွေ ကို Correlating and Normalization လုပ်ပုံတွေ
- Threat တွေအတွက် Kill Chain phase တွေ နဲ့ model တွေ
- Attack Vector တွေ နဲ့ အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ Packet Traffic တွေကို စောင့်ကြည့်ပုံတွေ
- သံသယဖြစ်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ Traffic Flow တွေကို စောင့်ကြည့်ပုံတွေ
- SOC Playbook တွေရဲ့ Management System တွေနဲ့ Attack တခုကို Response လုပ်ပုံတွေရဲ့ အရေးပါမှု Metric တွေ
- Incident တခုဖြစ်လာရင် ဘယ်လို တုန့်ပြန်ရမလဲ ဆိုတဲ့ Incident Response Plan အကြောင်းတွေ
- Incident Response Team တွေ အကြောင်းတွေ နဲ့
- Security နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကြားက အချက်အလက်ဖလှယ်ပုံသတ်မှတ်ပုံ တွေ အကြောင်းဖြစ်တဲ့ VERIS (Vocabulary for Event Recording and Incident Sharing) စတာတွေကို သင်ရပါတယ်။
( Section တခုချင်းစီအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်အလိုက် Lab တွေလုပ်ရပါတယ်။ အဓိက ပါတာကတော့ Kali Linux ပါပဲ။)
Module (၂) ခုစလုံးမှာ Section တခုပြီးတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပတ်သက်တာ တွေ ပါတဲ့ Lab တခု လုပ်ရပါတယ်။ ပုံမှန်ပါဝင်တဲ့ Device တွေကတော့ Windows OS, Linux OS တွေပါတဲ့ Virtual Machine တွေနဲ့ Router, Firewall တွေပါပဲ။
Scholar ရတဲ့ သူတွေမှာ အခွင့်အရေးက Section (၁) ခုပြီးရင် Challenge Question ဖြေရပါတယ်။ Multiple Choice ပါ။ အမှတ်အနေနဲ့ Bronze, Silver နဲ့ Gold တခုခု ရရပါမယ်။ Section တိုင်းရဲ့ Lab ကို လုပ်ရပါမယ်။
သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်အတွင်း မှာ Module တခုပြီးရပါမယ်။ ဒါတွေအားလုံး ပြည့်စုံရင် စာမေးပွဲဖြေဖို့ Exam Voucher ရပါတယ်။ (၂) ကြိမ် ဖြေခွင့်ရှိပါတယ်။ တခါ ကျခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။
Module တခုကို ၂ လ ဝန်းကျင် အချိန်ရပါတယ်။ တခုပြီးရင် စာမေးပွဲ တခါဖြေပေါ့ဗျာ။ စာမေးပွဲကတော့ Security Fundamental (210-250) နဲ့ Security Operations (210-255) ဆိုပြီး (၂) ဘာသာဖြေရတာပါ။
(၂) ဘာသာလုံး အောင်ပြီဆိုရင်တော့ အောက်က Logo မျိုးလေးနဲ့ CCNA (Cyber Ops) Certificate ရပြီပေါ့။
ကဲ ဒီလောက်ဆို လေ့လာချင်တဲ့သူတွေ လေ့လာဖို့ အချက်အလက် လုံလောက်ပြီထင်ပါတယ်။
Why we need to do ospf prefix suppression? How to ...